Factory Fefy - Mpanamboatra fefy Sina, mpamatsy
PVC mifono vy tariby harato koa dia karazana Weld wire harato fefy fa fonosina ao anaty horonana noho ny savaivony tariby tariby. Izy io dia antsoina hoe fefy harato Holland harato, harato fefy Euro, Green PVC mifono sisin-tany fefy sisin-tany amin'ny faritra sasany.
Fefy boribory boribory boribory roa dia antsoina koa hoe fehezam-bolan'ny tariby indroa, fefy zaridaina, fefy haingon-trano. Izy io dia fefy mety tsara hiarovana ny fanananao ary toa tsara tarehy ihany koa. Ka dia nampiasaina tamin'ny fomba tsotra tamin'ny injenieran'ny Kaominaly, injenieran'ny maritrano.
Fefy tariby vita amin'ny tariby miendrika L ho an'ny tranobe maritrano
Ny fefy tariby miendrika L dia matetika ampiasaina amin'ny fefy maritrano, ahitanao azy manodidina ny trano fonenana, tranom-barotra, toeram-piantsonana. Izy io koa dia mivarotra fefy fiarovana amin'ny tsenan'ny APCA.